Xaaladda Soomaalida ku sugan Wuhan
Daadgureyntii ugu horreysay ee dadka ajnabiga ah ee aan u dhalan Shiinaha, kuwaas oo ku sugan magaalada uu Fayruska ka dillaacay ee Wuhan, ayaa billaabatay Arbacada maanta ah.
Dhimashada xanuunka loo yaqaan Coronavirus ayaa gaartay 132 qof, iyadoo dalal badan oo caalamka ah ay soo rogeen amaro ay ku xanibayaan safarrada Shiinaha, si ay uga gaashaantaan xanuunkan, inkastoo goor sii horreysay laga helay dalal dhowr ah.
Dadkii ugu horreeyay ee laga daad gureeyo magaalada Wuhan ayaa noqday 206 qof oo u dhashay Japan, kuwaas oo diyaarad qaas ah ay ka dajisay garoonka Haneda ee magaalada Tokyo Arbacada maanta ah. Afar kamid ah dadkaasi ayaa isbitaalka la dhigay kadib markii ka cawdeen xanuun ay dareemeen.
Dhinaca kale, ilaa 34 qof oo Soomaali ah ayaa la sheegayaa inay ku sugan yihiin gobolka. Goor dhowayd ayaa Haaruun Macruuf waxa uu khadka telefoonka ee Wuhan uu kula xiriirray Cabdulqaadir Maxamed Cabdi oo dhigta Jaamacadda China University of Geoscience.